Fahamka Maxay Tilmaamayaan Xawaaraha Internetka?
Fahmidda Xawaaraha Internetka ee Broadband
Maxaa go'aaminaya xawaaraha xidhiidhkaaga iyo sida aad u tijaabiso xawaaraha internetka
Helitaanka muuqaalka barta internetka waa midka ugu muhiimsan ee helitaanka internetka. Si kastaba ha noqotee, adeegga faafinta waxaa loo soo mariyaa tiknoolajiyo kala duwan oo nooca tiknoolojiga ah ayaa go'aaminaya xawaaraha qadarka ah ee loo gudbiyay kombuyuutarka
Waxyaabo kale oo badan ayaa go'aamin doona xawaaraha xidhiidhkiina. Hase yeeshe, dhammaan arrimahan ayaa saameynaya sida ugu dhakhsaha badan ee aad u heli karto macluumaad, faylasha soo qaado, ama u hesho waraaqaha.
Xawaaraha Sinnaanta Tayada
Xawaaraha xidhiidhkaaga ayaa sidoo kale go'aaminaya tayada fiidiyowga aad daawato ama codka aad maqlayso. Qof kastaa waxa uu la kulmay dib u dhicin sugitaan oo sugaya filim ama hees si uu u soo dejiyo ama u daawado filim oo jarjaraya isla markaana ku baro kormeerahaaga.
Waxa ugu xun inay dhici karto markaad hesho fariin naxdin leh. Burburinta macnaheedu waa macquul ma'aha inaad xakamayso xawaaraha fiidiyowga lagu soo bandhigayo shaashadda kombiyuutarkaaga. Sidaa darteed waa inay si degdeg ah u uruurisaa xogta ka hor inta aysan sii wadin ciyaaro. Waxay la mid tahay sida qoraalkaagu u ururiyo xog aad ka soo dirto kombuyuutarkaaga si aad u daabacdo.
Iyadoo ku xiran codsiga aad isticmaaleysid, xawaaraha xiriirkaaga ayaa badanaa go'aan ka gaari doona in ay xitaa suurtogal tahay in si habboon loo daboolo codsiga. Filimku ma aha mid xiiso leh haddii uu joojiyo ciyaarida daqiiqado kasta. Marka, sida ugu dhakhsaha badan ee xidhiidhka aad u baahan tahay inaad qabato hawlo gaar ah oo aad maamusho barnaamijyo gaar ah?
Bandwidth Vs. Xawaaraha
Waxaa jira laba arrimood oo kala duwan oo la tixgelinayo marka la cabbiro xawaaraha . Bandwidth waxaa loola jeedaa xajmiga kumbuyuutarka ee xogta ku socoto. Xawaaraha waxaa loola jeedaa qiimaha ay ku socoto xogta.
Iyadoo la adeegsanayo qeexitaankaas, waxaad si dhakhso ah u arki kartaa in xawaaraha weyn uu u oggolaan doono xog badan oo socdaalka, kaas oo sidoo kale kordhin doona heerka uu ku socdo.
Hase yeeshee, tani macnaheedu maaha in xawaaraha khadkaaga ee ballaadhan uu la mid yahay bandwidth. Bandwidth waxay si toos ah u tixraaceysaa cabbirka "tubbada" ee ay u socoto.
Tusaale ahaan, aan u sheegno inaad ku wareejinayso faylka 128 Kbps (kilobits per second). Haddii aad bilowdo inaad wareejiso fayl kale waxay ku tartami doontaa xawaaraha xaddidan oo aad hoos ugu dhigi doonto xawaarahaaga. Haddii aad kordhisid bandwidth adiga oo ku daray line kale 128 Kbps ISDN, faylkaaga koowaad wuxuu socon doonaa 128 Kbps, laakiin hadda waxaad ku wareejin kartaa labada faylalka 128 Kbps oo aan udhigin xawaaraha.
Miisaanku wuxuu noqonayaa waddo weyn oo leh xadka xawaaraha 65mph. Xitaa haddii laynka dheeraadka ah lagu daro in lagu qabto baabuurta kale, xadka xawaaraha waa 65mph.
Bixiyeyaasha Wareegga leh iyo Xawaaraha Xayeysiiska
Sababahan oo kale, bixiyeyaasha fidiyaha xayeysiinta ah waxay xayeysiinayaan xawaaraha, oo aan loo balan qaadin tirooyinka. Tani waxay adkeyneysaa in si gaar ah loo qiimeeyo sida ugu dhakhsaha badan xiriir gaar ah.
Bixiyeyaasha waxay ogyihiin inay awoodaan inay bixiyaan xaddi xaddidan oo ah xawilaad si ay ula tacaalaan xaddi gaar ah oo xog ah. Ma ogaan karaan marka la eego marka xogtan ay noqon doonto socdaal ama marka dalabaadka gaarka ah la dhigo shabakadda.
Halkii laga heli lahaa xawaare ballaadhan oo aan macquul aheyn in si joogta ah loo sii wado, waxay bixiyaan xawaare ka dhasha khadadka qaarkood.
Tusaale ahaan, mid ka mid ah bixiyeyaasha ugu weyn ee fidiyaha ah ayaa bixiya xirmooyinka internetka ee ballaaran ee xawaaraha soo socda:
Xawaarahaaga isku xirku waa inuu ku dhacaa inta u dhexeysa liistooyinka ku qoran liistada la bixiyay. Xaddiga xaddiga udhaxaadka ah ee bixiyeyaashu waa inaysan ka yareyn xawaaraha ugu sareeya ee liiska lagu taxay.
Tusaale ahaan, ma awoodi kartid in ka badan 15 Mbps (megabits halkii labaad) oo leh qiyaasta 15 Mbps. Bixiyeyaasha qaarkood waxay bixiyaan xawaare gaara. Xaaladahan, "xawaaraha" waa xawaaraha, taas oo macnaheedu yahay in xawaaraha aad dhab ahaantii la kulmi doonto uu noqon karo mid aad u hooseeya.
Soo qaado Vs. Kusiiji Speed
Asal ahaan, ma jirto farqi u dhexeeya soo dejinta iyo soo qaadashada macluumaadka dhinac ka jihada wareejinta xogta. Xawaarahaaga xawaaraha internetka waa si deg deg ah, si deg-deg ah u furtid iyo soo-dejinta awoodda.
Si xawli ah u soo daji iyo xawilid si aad u fudud ayaa loo qiyaasi karaa marka ay yihiin simmetrical . Tani waxay macnaheedu tahay in download iyo xawaareynta xawaaruhu isku mid yihiin.
Inkastoo xawaaraha lagu soo wareejinayo waxaa badanaa lagu xoojiyaa adeeg bixiyeyaasha fidinta, xawaareynta xawaaruhu sidoo kale waa tixgelin muhiim ah. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii ganacsigaadu ku xiran tahay inaad u gudbiso xog aad u tiro badan adeegyada adeegga daruuriga ah.
Xawaaraha xawaaruhu waa badanaa si ka dhaqso badan marka loo eego xawaaraha, sababta oo ah inta badan dadka isticmaala internetka waxay ka helaan xogta internetka halkii ay ku gudbin lahaayeen xogta iyo feylalka internetka. Haddii aad tahay qof isticmaala faylasha waaweyn ama macluumaadka kale, waa inaad eegtaa xawaaraha sare ee wareejinta. Bixiyeyaasha badankood waxay awoodaan inay si sahlan u bixiyaan xawaare sare oo sareeya iyagoo hoos u dhigaya xawaaraha soo socoda iyadoo la ilaalinayo qorshe isku mid ah.
Megabits iyo Gigabits
Qaybta ugu yar ee xogta dhijitaalka ah waa waxoogaa. A byte wuxuu u dhigmaa 8 bits iyo kun oo bytes waa kilobyte. Dhowr sano ka hor, tani waxay ahayd heerka ugu sarreeya ee aad u baahan tahay inaad ogaato. Xidhiidhada caadiga ah ee dial-up ayaa ah wax ka badan 56 Kbps.
Xawaaraha Broadband waxaa sida caadiga ah lagu qiyaasaa megabits halkii labaad . Hal megabit ayaa u dhigma 1000 kiiloomitir waxaana loo yaqaanaa Mb ama Mbps (tusaale, 15 Mb ama 15 Mbps). Shuruudaha xawaaraha ayaa si degdeg ah u kordhaya, oo leh xawaaraha gigabit (Gbps) si dhakhso ah u noqdaan heerka cusub ee horumarinta dhaqaalaha iyo isticmaalka hay'adaha.
Tiknoolajiyadee ayaa ugu fiican?
Hadda oo aad awoodid inaad ogaatid xawaaraha aad u baahan tahay si aad u maamusho codsiyada aad rabto, taas oo tiknoolajiyada balaadhan oo awood u leh inay gaarsiiyaan xawaarahaas?
Qeexitaankeedu waxaay tahay, xawaareyntu waa isku xirka Internet-kiisu sarreeyo oo xitaa had iyo goorba. Isticmaalka galinta, dhanka kale, wuxuu u baahan yahay modem ah inuu bilaabo 56 Kbps oo isku xirka internetka.
Guddiga Isgaadhsiinta Federaalka (FCC) wuxuu kiciyay xawaaraha ugu hooseeya ee bandowga 4 Mbps iyo 1 Mbps. Tani iminka waa nidaam cusub ee ugu yar ee fara badan. Si kastaba ha ahaatee, tani waa mid aan ku filnayn codsiyada badan, oo ay ku jiraan akhristayaasha adeegyada video sida Netflix.
FCC waxay soo bandhigtay hadaf gaar ah oo ku saabsan Qorshaha Qaranka ee Weyn ee loo yaqaan 'Broadband Speeds'. Mid ka mid ah himilooyinkii ugu weynaa ee Obama ee Obama wuxuu ahaa inay 100 milyan oo qof ku xiraan xawaaraha 100 Mbps illaa 2020.
Tiknoolajiyada Broadband iyo Speeds
Tiknoolajiyada ballaadhan Kala sooc xawaaraha Speed Xidhiidhka
Dial-up Ilaa 56kbps Khadka Taleefanka
DSL 768 Kbps - 6 Mbps Khadka Taleefanka
Satellite 400 Kbps - 2 Mbps Satellite Simba
Modem Cable 1 Mbps - 1 Gbps Xiriiriyaha Isku-xirka
WiMax ilaa 128 Mbps Wireless
Fiber ilaa 1 Gbps Fiber Optics
4G / LTE ilaa 12 Mbps Wireless Wireless
Sida Loo Isticmaalo Xawaarahaaga
Haddii xawaarahaaga xidhiidhkaaga uu ka duwan yahay waxa bixiyahaagu xayeysiinayo, sidee baad ku ogaaneysaa waxa dhabta ah? FCC waxay bixisaa talooyin iyo goob baaritaan ah si ay kaaga caawiso inaad go'aamiso haddii aad heleyso xawaaraha aad bixiso.
Fursad kale ayaa ah in la isticmaalo imtixaanka xawaaraha online-ka ah oo aad u yar ayaa loo heli karaa bilaash.
Xitaa waxaa dhici karta in ay mid gaar ah u tahay bixiyahaaga internetka haddii aad isticmaasho mid ka mid ah shirkadaha waaweyn. Mid ka mid ah non-ISP si aad u hubiso waa speedof.me. Waa mid aad u fudud in la isticmaalo oo ku siin doono natiijooyin sax ah daqiiqad ama wax kale.
Haddii aad aragto in xiriirkaaga uu u muuqdo mid gaaban ama inuusan tijaabin heerarka adeegaagu uu bixinayo, wac shirkada oo kala hadal iyaga. Dabcan, waa in aan maskaxda ku hayno in qalabkeenu uu wax ku ool yahay. Routing wireless ama kombiyuutar qunyar socod ah ayaa si aad ah ugu xakameyn kara xiriirintaada internetka.
Yareynta iyo Awood-siinta
Qalabka Ping Free oo loogu talagalay Xallinta Dhibaatooyinka Shabakada
Hagaha Shabakadda Isbedelka Lagala Xiro
PeerBlock Firewall: Hayso P2P-ga Gaarka ah ee Windows
Baro ujeedada 192.168.1.254 Router IP Address
Nagle Algorithm ee TCP Network Isgaadhsiinta
Fiiri waxa cusub ee Android Wear 2.0
Diskpart (Xakamaynta Raysashada)
Waa maxay ASPX File?
Matrix44 4K Ultra HD HDMI Switcher
Kireysiga Krondor - Curyaanka PC-ga oo bilaash ah
Su'aalaha Soo-celinta ee Online
Isticmaalida Xidhiidhyada Hard to link Files in Linux
Xeerarka Sexting Texas
Waa Maxay TEXT
7 Shirkadood ee ugu Fiican Qiiqa Sigaar ah ee iibsanaya 2018
10 Shaqo ee ugu Fiican Apps Apps ee 2018 for IOS & Android
Epson Home Cinema 640 3LCD Video Projector Profiled
Isticmaal Nooca Badbaadada si aad u ogaato Dhibaatooyinka Bilowga Qoraalka Microsoft
Ku soo rogista Diiwaanada Dhawr-galka si Gaar ah Google Chrome
Tafatir Qodobbada Amniga Macro ee loogu talagalay Word Office-ka
Arrimaha Sharciga ee Bloggers Waa Inay Fahmaan
Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaatid Qodob kasta oo Shirkadda Lagu Rabo
Sida loo cusbooneysiiyo Nintendo 3DS eShop Software
Tilmaame-barashada ESRB-da ayaa sharraxaya waxa ay ka dhigan tahay qiimeynta cayaarta ciyaaraha kubbadda Boy Game
Qeexitaanka Jadwalka iyo Qaababka ee Excel